Apple Fitness + iyaqhubeka ukuba ngcono kwaye sihlala silindile ... | Ndisuka mac
Siyazi kakuhle ukuba lilizwe lokuqala elibi kwaye ngokufanelekileyo umsebenzisi ngamnye ufuna ezinye iinkonzo, kule meko Apple Fitness + iyaphuculwa yiApple kodwa ingxaki kukuba ayifikeleli kuwo onke amazwe.
Kule meko ukuzilolonga ngakumbi kuyongezwa kubasebenzisi abadala, kwabo baqala nje ngezemidlalo (abaqalayo) kunye nabafazi abakhulelweyo. Apple Fitness + yinkonzo ewela ngaphakathi kwepakethi yenkonzo yeApple kwiApple One kuphela kwamanye amazwe, sisalinde iindaba okanye amarhe malunga nokuqaliswa kwayo.
Kubonakala ngathi ezinye iiklasi zeyoga, uqeqesho lwamandla exesha elibizwa ngokuba yi-HIIT, ukuhamba (kunye nomlingisi uJane Fonda kwiintetho), okanye uqeqesho lokuchasa kongezwa kwinkonzo ye-Apple Fitness + yeembaleki. abasebenzisi abafuna ukuqala ukuhamba nokwenza imisebenzi yomzimba.
Ukusukela oko yasungulwa, iApple Fitness + ibisoloko ibonakala njengenkonzo enkulu yokukhuthaza abasebenzisi ukuba bahambe kwaye benze izinto zomzimba. Ubhubhane ochaphazela iplanethi inyuse imfuno yabasebenzisi yokwenza umthambo ekhaya, egadini, kwipatiyo, njl. ke ngale ndlela kulungile ukuba nolu hlobo "loncedo" lufumanekayo kuhlala kulungile.
Singayithanda iApple ukongeza le nkonzo kwiApple One kwilizwe lethu nakwamanye amazwe angaphaya kweMelika. Ke siya kuyimamela le ntetho ngo-Epreli 20 xa kunokuthi kubekho iindaba ngayo okanye kwi-WWDC elandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Apple Fitness + iyaqhubeka ukuba ngcono kwaye sihlala silindile ...
Insiza iguqula i-OPPO Watch kunye ne-OPPO Band ehambelana ne-Apple Health